Kianin’ireo Mpikatroka Mafana Fo Ilay ‘Dame De Fer’-n’i India Tamin’ny Fahasahiany Nanajanona Ny Fitokonany Tsy Nihinan-kanina Nandritra Ny 16 Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2016 12:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, বাংলা, Ελληνικά, English
Dikasary avy tamin'ny lahatsarin'ny The Quint, mampiseho an'i Irom Sharmilla nanatshatra ny 16 taona tsy nihinanany hanina.
Tsy ela akory izay, nanapaka hevitra ny hampitsahatra ny 16 taona be izao nitokonany tsy nihinan-kanina ilay mpikatroka mafana fo Irom Chanu Sharmila, nanohitra ilay lalàna mafy be sy nahatonga resabe, mba hiditra amin'ny politika any amin'ny fanjakana avaratra- atsinanan'i India, an'i Manipur ary hipetraka miaraka amin'ny olon-tiany. Raha nitehaka ny fanapahankeviny sy ny fahasahiany (antsoina matetika hoe ilay fitokonana tsy mihinan-kanina lava indrindra manerana ny tany ny azy) ny maro, tsy faly kosa ny sasany tamin'ireo mpanohana azy sy ireo namany mpiara-mikatroka aminy.
Nieritreritra ny hijanona ao amin'ny vondrom-piarahamonina iray ao an-toerana ao Manipur i Sharmila, 44 taona, taorian'ny namoahana azy tao amin'ny hopitaly nitazonana azy sy nanerena azy hisakafo tamin'ny alalan'ny fantsona teo amin'ny orony, ho fampiharana ny lalàna mandrara ny famonoana tena. Fa nandà azy ireo mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina, toy ny nataon'ny fiangonana Iskcon teo an-toerana. Noentin'ny polisy niverina tany amin'ny hopitaly izy avy eo aloha mba hipetraka mandra-paha..
Nitaraina ireo mpikatroka avy tamin'ny vondrona Sharmila Kanba Lup (Fikambanana Arovy i Sharmila) hoe tsy mba nanantona azy ireo akory i Sharmila nialohan'ny nanapahany hevitra ny hampiato ny fitokonany tsy hisakafo, ary mahatsiaro ho “tohina” sy “voapetrapetraka”. Vondrona iray hafa indray, ny fikambanan'ireo Manipuri mpisintaka, Vovonana ho an'ny Firaisana Sosialista, Kangleipak, nanainga azy tsy hanambadiany ilay sipany, lehilahy Britanika-Indiana, amin'ny fieritreretana hoe mampiahiahy ny razana maha-Indiana azy; nahatsapa ireo mpanohana sasany fa mety ny fiarahany tamin'io sipany io no “nitondra azy tamin'ny làlana diso” tamin'ny fandraisana io fanapahan-kevitra io.
Tena mahagaga ny haratsian-toetra aseho amin'i Irom Sharmila. Toy ny hoe tsy afaka manana ny fiainany manokana na ireo safidiny izy. Tena mifanohitra tanteraka amin'ny zon'olombelona niadiany mihitsy
Ny volana Novambra 2000, nanomboka ny hetsi-panoherany am-pilaminana i Sharmila, fantatra ihany koa amin'ny hoe ‘Dame de Fer’ an'i Manipur. Ny tena fototry ny fangatahany dia ny fanafoanana ny Lalànan'ny Hery Mitam-piadiana (Hery Manokana) (AFSPA), izay manome alalana ireo herin'ny governemanta hisitraka ny tsimatimanota amin'ireo ezaka ataony hanafoanana ireo mpikatroka sy mpisitaka miasa ao amin'ny faritra.
Maro ireo manao azy ho olo-malazan'ny Manipuri, ary milaza fa mety handoto io fijery io ny fanajanonany ny fitokonany hifady hanina sy ny fidirany amin'ny politika. Fikambanana iray hafa, ny Sharmila Kanba Lup (Fanentanana Vonjeo i Sharmila), nofoanana taorian'ny nanambaràny ny hanajanonany ny fitokonany tsy hihinan-kanina, na dia hita ho nahazo ny tsodranon'i Sharmila aza izany.
Arahabaina an-tànan-droa foana mba handimby azy ireo milaza fa tokony nanohy ny fifadian-kaniny i #IromSharmila. Misy handimby ?
Nilaza ireo tsikera sy ny fandavana azy niainany teo an-toerana izy, Sharmila malahelo no nilaza izao tamin'ny mpanao gazety :
Amin'izao fotoana izao, mahatsapa aho fa ny zavatra tsara indrindra ho azy ireo dia mety ny fidaroahana ahy mandrapaha-faty. Inona no maha-samihafa ny hoe voadaroka ho faty na maty tamin'ny fifadian-kanina. Tsy dia misy loatra. Tian'izy ireo aho hijanona ho martiora mandrakizay. Kanefa tsy afaka ny ho martiora foana aho.
‘Tampon'ny fahapotehan'ny fomba fisainana’
Namintina ny toe-draharaha tao amin'ny gazety an-tsoratra Hindustan Times i Manu Joseph :
Nolazain-dry zareo fa namadika ny zavatra nitoloman'izy ireo izy. Nasandratr'izy ireo ho “dame de fer” izy, kanefa izy ankehitriny tsy mitondra tena toy izany. Nanao an-kilabao azy ireo namana raha misy patsa sy ny fianakaviana. Manararaotra azy ankehitriny ireo olona nanao azy ho toy ny andriamanitra kely. Vondrona iray farafahakeliny no nandrahona azy.
Tao amin'ny Facebook,namoaka ny heviny momba ilay vaovao i Irshad Ahmed:
Nanary ny maha-olona azy i India.An-dàlam-pihatahana amin'i India ny fon'ireo olon'ny Avaratra Atsinanana sy Kashmir.
Hisian'ny India tsaratsara kokoa, tsy maintsy mampiaka-peo ho an'ny zon'ny tsirairay sy ny daholobe isika, tsy tokony hanome alalana ireo mpanao politika vao mainka hampizarazara antsika isika.
Notsikerain'i Shashikumar Velath tao amin'ny Facebook ireo “nanararaotra nampiasa” an'i Sharmila :
Samy tomponandraikitra daholo ireo fikambanana rehetra mpiaro ny zon'olombelona – teo amin'ny firenena sy iraisam-pirenena – tamin'ny famoronana olo-malaza kanefa tsy nieritreritra akory tetikady hivoahana any aoriana. Samy nanararaotra sy nampiasa ny tolony avokoa ny rehetra mba hananganany ny andrin'ireo fampielezankevitra terin-dry zareo, nanadino ny fijalian'ny tena olombelona iray. Norotsirotsian'izy ireo ny fiarahamonina mba hino fa fampisehoana ny tena fiainana tsy hisy fiafaràny ny fitokonan'i Irom tsy hihinan-kanina. Izany no miseho rehefa mampiakatra ny zavatra rehetra amin'ny fanadihadiana antsipirihany ireo fanitsakitsahana ny zo oharina amin'ireo lalàna fampiasa eo amin'ny firenena sy iraisam-pirenena, ireo mpiasa biraon'ny mpiaro zon'olombelona […]
Tampon'ny fahapotehan'ny fomba fisainana.
Nanome ny tranony ilay mpilalao sarimihetsika Indiana, Renuka Shahane, ary nankasitraka ireo ezak'i Sharmila:
Irom Sharmila, raha tsy manana toerana vonona ny hanaiky anao ianao, miangavy anao hipetraka miaraka amiko any Mumbai, ho voninahitra ho ahy izany! Tsy mendrika hosainina fanindroany akory ireo rehetra mpiaro zon'olombelona & “mpikatroka mafana fo” mpanohitra ny AFSPA izay faly sy nanohana fotsiny ihany fony ianao nisy fantsona nafatotra tamin'ny oronao mba hanerena anao hisakafo, na koa fony ianao niatrika tamim-pahasahiana ny hatezeran'ny Fanjakana taminao. Mbola miady manohitra ny AFSPA ianao; hanao izany miaraka amin'ny olona nosafidianao ho tiavina ianao, ary amin'ny fomba izay ianao ary ianao samirery no tokony hisafidy ny hanaovana azy. Efa zatra loatra ny tsy fitovian-kevitra ianao. Ankehitriny, avy amin'ireo olona noheverinao ho anao izany. Tena sarotra kokoa izany ary mampalahelo.
Manoratra ao amin'ny vohikala “infotainment” (loharanom-baovao) Arre, nilazalaza ireo tsy rariny izay atrehan'i Sharmila amin'ny lafiny rehetra i Shoma Chaudhury:
Tokony ho lasa fandribaratra eo amin'ny fiainan'ny rehetra ao India ny hetsi-panoheran'i Sharmila. Tokony nanome fofonaina vaovao azy io ny media. Tokony niaiky ny herin-tsainy sy niroso tamin'ny fifampiresahana ny Fanjakana. Mifanohitra amin'izany anefa, reraka taminy ny media ary nitaritarika an'i Sharmila nirefarefa tamin'ny tany ny Fanjakana sady namafa ny fanintonana nananan'ny hetsi-panoherany.
Mety ho hafa ny toedraharaha raha nahatoky ny firotsahany ho amin'ny fanafoanana ilay Lalànan'ny Hery Mitam-piadiana (Hery Manokana), izay notsipahany, ireo mpanaraka an'i Sharmila teo aloha:
Tsy nisy olona niteny ahy hanomboka hanao fifadian-kanina tamin'izany (Novambra 2000). Ary nandresy lahatra ireo hafa hanjohy ahy aho satria fantatro hoe tena mety ho sarotra izany ho an'ny vehivavy izay manana andraikitra maro ao aminà firenena voazarazaran'ny fifandirana. Nahoana ary izy ireo no tsy afaka mahazo hoe tsy niala tamin'ny tanjona hahazoana ny fanafoanana ny AFSPA aho?
Ary eo ankilan'izany, safidiny manokana madiodio izay zavatra ataon'i Sharmila amin'ny fiainany manokana.